'1984' Ichave Mwaka Ipfupi yeAHS Yakamboitika - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau '1984' Ichave Mwaka Ipfupi yeAHS
'1984' Ichave Mwaka Ipfupi yeAHS
by Timothy Rawles October 31, 2019 705 maonero
Vamwe vanogona kuzvifarira, vamwe vangasadaro, asi AHS: 1984 ichave nemwaka wayo wekupedzisira munaNovember 14, ichiita iyo iyo mwaka mupfupi yeiyo nhevedzano kusvika zvino.
1984 ndiro weirdest pfungwa kubvira Roanoke, vamwe vanototaura kuti kutsauka kwegore rino ndekwekuti chinhu chose iVHS bhaisikopo.
Zvino mumwaka wayo wepfumbamwe, 1984 inotanga sekukanda kumashure kune ma slasher e neon gumi, isina kana imwe, asi piri mhondi dzinoteedzera vanachipangamazano vemusasa kuburikidza nemusango mune imwe nhandare yekare yakasiyiwa iyo yakarongerwa kuvhurwa kuvana zuva rinotevera.
Sezvinotarisirwa ne genre boilerplates, vanachipangamazano vanotorwa-ne-imwe munzira dzakasiyana, imwe neimwe iine ropa rakawanda sezvinobvira.
Fans dzakakamurwa nekuti sekuwanda kwezvakawanda zveMurphy, zvinhu hazviwanzo sezvazvinoratidzika uye zvinobva zvanyatso kujeka kuti mhondi chaidzo ndiani, vachidzora nhevedzano mumarudzi ese enzira.
Nehupfupi hwayo, vatariri vachitsvaga mhinduro vanongomirira mamwe mavhiki mashoma.
Mukuenzanisa, Imba Imba aive nezvikamu gumi nembiri, Kutsigira aive nezvikamu gumi nembiri, Coven aive nezvikamu gumi nembiri, Freakshow aive nezvikamu gumi nembiri, hotera aive nezvikamu gumi nembiri, Roanoke aive nezvikamu gumi nembiri, Cult yakanga iine zvikamu 11, uye Apocalypse yaive nezvikamu gumi.
Kunyangwe vamwe vatambi vakuru vasipo kubva mwaka uno: Kathy Bates, Sarah Paulson, Lady Gaga, zvinopa vamwe mukana wekupenya munzvimbo yavo. Chinyorwa chakakosha chinofanira kuenda kuna Gus Kenworthy uye Pose Angelica Ross.
American Horror Nhau inoshambadza China neChina nenguva dza10 pm paFOX. Dzvanya HERE mamwe mashoko.